ROMANA 6.1-14	F. 3, 4 | Fitandremana Ankadifotsy
ROMANA 6.1-14	F. 3, 4
Miaina afaka amin’ny ota (1-7). Tsy afaka mitoetra ao amin’ny ota intsony ny mino an’i Jesoa Kristy nandalo fibebahana marina sy vita batisa. Tamin’izany mantsy no nandevenana sy nanombohana ny ota tsy hanam-pahefana amin’ny fiainan’ny mpino intsony. Niara-maty tamin’ny Kristy teo amin’ny hazo fijaliana rahateo ny ota ka afaka amin’izany izay rehetra mino Azy.
Saintsaino : “Sambatra ny olona ... tsy mijanona eo amin’ny làlana falehan’ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira” (Salamo 1.1)
Miaina ao amin’i Jesoa sy ho an’i Jesoa (8-11). Ny mpino afaka amin’ny ota dia tafantsagana tamin’ny maty ka miara-belona amin’i Jesoa ary velona ho Azy ka tokony ho marina aminy izay voasaratra ao amin’ny Galatiana 2.20 hoe “Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy”.
Hoy ny Apostoly Paoly : “Fa Kristy no antony ahavelomako” (Filipiana 1.21a)
Miaina eo ambanin’ny fahasoavana (12-14) fa tsy eo ambanin’ny lalàna ka tsy mamela ny ota hanapaka ny tenany izay efa natolony ho an’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Tsy midika akory izany hoe tsy ilaina intsony ny lalàna izay azo heverina ho mari-pandrefesana ny ota fa ilay fahasoavana namonjena azy no tokony hitarika ny mpino tsy hanota.
Hoy mantsy Jesoa : “Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava fa hanatanteraka” (Matio 5.17)